पाठेघरको क्यान्सर कसरी हुन्छ ? यसबाट कसरि बच्न सकिन्छ ? पढ्नुहोस… ~ FMS News Info
पाठेघरको क्यान्सर कसरी हुन्छ ? यसबाट कसरि बच्न सकिन्छ ? पढ्नुहोस…
पछिल्लो समएमा पाठेघरको क्यान्सरका बिरामी बढी रहेको पाइएको छ । कुनै निश्चित कारणले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ भनेर किटान गर्न नसकिने भएपनि एचपीभी (ह्युमेन पापिलोमा भाइरस) नै यसको मुख्य कारण हो ।
करिब ७० प्रतिशत पाठेघरको मुखको क्यान्सर एचभीपीसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । कम उमेरमा विवाह हुनु, कम उमेरमै यौन सम्पर्क स्थापित हुनु, एक भन्दा बढी जना सँग यौनसम्पर्क राख्नु, कम उमेरमा अनि धेरै बच्चा पाउनु, आफ्नो गोप्य अङ्गको उचित सरसफाई नगर्नु, चुरोट खैनी तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नु, यौनरोग एवं गुप्ताङ्ग सम्बन्धी दीर्घरोगी हुनु पाठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्नाको प्रमुख कारणहरु हुन् । तर ह्युमेन पापिलोमा भाइरसलाई यसको प्रमुख कारक तत्व मानिएको छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरको शुरुवाती अवस्थामा कुनै लक्षण चिन्ह नभए पनि शारीरिक जाँच गर्दा केही चिन्ह भेटिनसक्छ । महिनावारी सुकीसकेकी प्रौढ महिलामा फेरि रगत तथा रगत मिसिएको योनीश्राव देखा पर्न सक्छ । त्यसैगरी यौनसम्पर्क पश्चात् रगत देखापर्ने सिकायत हुनसक्छ । गोप्यअङ्गबाट असामान्य प्रकारको गन्हाउने श्राव बग्न सक्छ । महिनावारी सुकी नसकेकी महिलामा महिनावारीका बेला धेरै दिनसम्म वा बढी मात्रामा रगत बग्न सक्ने हुन सक्छ । यो रोगको प्रारम्भिक स्थितिमा कुनै पीडा हुन्न । दुख्न लाग्दा क्यान्सर फैलिसकेको हुन्छ । यो रोग निकै फैलिसकेपछि खुट्टा सुन्निने, पेट फुल्ने, पिसाब नहुने, कम्मरको हड्डी दुख्ने आदि पनि हुन्छ ।
पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरको रोकथामका लागि यसको कारक तत्वलाई विचार गरेर कलिलै उमेरमा विवाह नगर्ने, बालविवाहलाई निरुत्साह गर्ने, धेरै बच्चा नपाउने, निश्चित अन्तरालमा मात्र बच्चा पाउने, गोप्य अङ्गको सरसफाईमा ध्यान दिने, धेरै जनासँग यौनसम्पर्क नराख्ने, चुरोट खैनी तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने, यौनरोग एवं गुप्ताङ्गसम्बन्धी रोगको समयमै आवश्यक उपचार गराएमा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिने रोग हो भन्ने कुरा राम्ररी मनन गर्नुपर्दछ ।
जनचेतनाका लागि साभार गरिएको ।